SIDA LOO SAMEEYO NUUJIYE SI TOOS AH IYO SUUFKA LOOGU TALAGALAY SHINBIRAHA GACMAHAAGA - BEERAHA DIGAAGA
Sidee loo sameeyaa noocyo kala duwan oo nuucyada duck leh gacmahooda
Samaynta gacmohooda u diyaarsan ee nuucyada kala duwan - hawsha loo malayn karo xataa bilawga beeralayda digaaga. Faa'iidada alaabooyinkaas ka badan kuwa la iibsaday waa in ay si gaar ah loogu talagalay qoyskooda, iyada oo la tixgelinayo tirada shakhsiyaadka ee hoyga gudaha ee guriga. Maqaalkani wuxuu kuu sheegi doonaa sida loo sameeyo qalab kala duwan oo loogu talagalay quudinta shimbiraha, iyo sidoo kale talooyin ka yimid beeralayda qibrada leh ee ku saabsan wax soo saarka iyo hawlgalka.
Waa maxay quudinta
Laga bilaabo inuu soo saaro xarigga, waa muhiim inaad tixgeliso shuruudaha khasabka ah ee naqshadeynta guriga. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah talooyin kaa caawin doona:
Naqshadeynta nuujiyaha waa inay ahaato mid ku habboon shimbirta, si ay si fudud ugu buuxsami karto quudinta, iyo sidoo kale inay fududahay gaadiidka iyo nadiifinta haraaga digaaga iyo sunta.
Haddii quudinta ka samaysan tahay qoryo, markaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho alwaax tayo leh.
Waa muhiim inaad taxaddar ku sameyso qalabka si taxaddar leh u sameysma qalabka iyo amniga dhismaha labada shimbirood iyo kan beerta digaaga: quudinta waa inaysan lahayn dhinacyo fiiqan iyo burras si looga fogaado dhaawacyada iyo dhimista.
Wixii shimbiraha da'doodu kala duwan tahay, cabbirada ku habboon ee feederiyeyaashu waa lagama maarmaanka u ah: for chicks ilaa 1 bilood, habka cuntada ee 5 cm ayaa ka tagay; da'da 12 bilood - illaa 10-12 cm; shimbir qaangaar ah - 20 cm.
Waxyaabaha loogu talagalay wax soo saarida dhismayaasha waa inay ahaataa mid joogto ah oo adkaysi u leh dusha (alwaax, birta, caag).
Tan iyo shimbiruhu waa shimbiro biyo, way adagtahay in ay ku noolaadaan biyo la'aan. Samee balli yar yar iyaga.
Sida loo sameeyo feeders for shimbiraha
Waxaa jira weelal qallalan oo qoyan oo qoyan, kuwaas oo ka mid ah bunker, gawaarida iyo gunta. Isla mar ahaantaana, haddii quudinta ka samaysan tahay bir ama caag, ka dibna waxay noqon kartaa mid caalami ah.
Noockan noocan ah wuxuu ka kooban yahay 2 qeybood: alaab-qaadaha iyo saxaarada. Naqshada qashinka waxaa loogu talagalay in si tartiib tartiib ah loo siiyo quudin cusub, oo qallajin ah sida ay u cunaan, iyo sidoo kale waxay ilaalinayaan nuujinta ka soo cayayaanka iyo boodhka. Hoos waxaa ku xusan qeexida sida loo sameeyo bakeeriga qashinka ee warqadda.
Ugu horreyn waxaad u baahan tahay inaad sameysid warqad sawir gacmeedyo leh qiyaasaha lagama maarmaanka u ah una diyaar garawga. Jaantusku wuxuu muujinayaa qiyaastii qiyaasta dhismaha, laakiin adigaa adigu isbedeleysaa cabbirahaaga quudintaada tirada dadka ee beertaada.
Kansarkan wuxuu ka kooban yahay laba dhinac oo isku mid ah, darbiyada hore iyo kan hoose ee tuubada, iyo sidoo kale daboolka ku xiran laabaha. Dhabarka dhinacyada iyo dhabarka waxay sameyn doonaan sanduuqa quudinta hoose (saxan).
Ka dibna dhinacyada dhinacyada iyo hoosta. Marka la xisaabinayo xuduudaha, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo in hal naani uu u baahan yahay 7-8 cm width of tray, sidaas darteed tirada shakhsiyaadka ay ku kordhiyaan qiimaha this. Natiijadu waxay noqon doontaa awoodda bunkerka lagu muujiyay sawirka.
Akhri nuucyada ugu caansan ee ducks iyo muuqaalada qaar ka mid ah shimbirahaas.
Si aad u sameysid xargaha, waxaad u baahan doontaa qalabka soo socda:
tufaax qaro weyn ama dhuxul ah 2 cm qaro weyn;
xoojinta xayiraadda qoryaha;
naqshadaha alaabada alwaaxa;
cayayaanka ganaaxa ah;
qiyaasta cajaladda ama taliyaha;
Alaabtu waxay cageyneysaa cabbirka yar (90 darajo).
Tilmaan-bixinnada wax soo saar ee naas-nuujiyaha: Sawireynta Bunker Feeder
Warqadda warqadda si aad u sawirtid dhammaan faahfaahinta qaababka.
Jigsaw ayaa jarjaraya jajabyada la soo saaray.
Ku calaamadee cidhifyada jajabyada leh warqad ciid ah.
Isticmaalida shidaal si aad u sameyso sanduuqyada nalka.
Ku rakib tuubooyinka xoojinta ee ku xirma xirmooyinka isku xira oo adkee dhismaha oo idil iyadoo la isticmaalayo naas-nadiifinta.
Ku dhaji daboolka sanduuqa si aad u isticmaashid adigoo isticmaalaya alaabta guriga.
Waa muhiim! Mar walba waa inay noqotaa meel ku filan oo loogu talagalay dhammaan shimbiraha meel u dhow feederiyeyaasha. Haddii kale, dadka daciifka ah ma heli doonaan helitaanka bilaash ah ee quudinta oo aad uga fogaanaya horumarka.
Taansoolka loogu talagalay quudinta dufan leh quudka qalalan ayaa ah quudin si toos ah, taas oo ka mid ah alaabta nooca bunker ah. Xaaladdan oo kale, waa taangaro khafiif ah oo ay ku jiraan quudinta iyo furitaanka cuntada quudinta, oo lagu dulsaaray balaastik. Iyada oo naqshadahaan, sida la cuno, raashinka si tartiib tartiib ah uga daadi weelka weelka. Waxaad samaysan kartaa qalabka wax lagu nadiifiyo ee baaldi balaastik ah adigoon ku qaadin dadaal aad u badan isla markaana aan sameynin sawir horudhac ah.
Baro sida loo dhiso barn for for ducks iyo inaad digaag iyo shimbir wada wada.
Wixii soo saaris ah ee taangiyada si toos ah loogu talagalay quudin waxay u baahan doontaa:
baaldi ka sameysan caag qaro weyn leh oo dabool leh, mugga 8-10 litir;
baqshad ballaaran oo loogu talagalay pallet (dhexroorka foornada waa in uu ahaado 30 cm ka weyn bacda hoose, iyo dhererka dhinacyada - aan ka yarayn 15 cm) ama saxaarad la kala iibsanayo dukaanka;
balaastigga ama korontada;
nuts iyo nalka;
Sharaxaadda soo saarista nuujiyaha:
Calaamadda hoose ee baaldi ayadoo la isticmaalayo qiyaas cajalad, qalin qalin iyo meel wareeg ah ee godadka yar yar ee leh wareega 5 cm, ka dibna iyaga jar. Tirada godadka waxay noqon kartaa mid aan ikhtiyaar aheyn, laakiin marka la isticmaalayo saxaarada leh qaybaha kala duwan, tirada godadka waa inay u dhigantaa tirada qeybaha saxda ah.
Cidhifyada laga jaray waa in lagu daaweeyo waraaqo qurux badan si loo yareeyo dhaawaca inta lagu guda jiro shaqada dheeraadka ah, iyo sidoo kale in laga hortago in shimbiraha dhaawacmay inta lagu jiro quudinta.
Ku darso godad yar oo hoose ee baaldi caag ah, iyo sidoo kale fijaanno, si ay u jaanqaadaan midba midka kale.
Ku rid weel balaastiga ah weelka la jarjaro iyo nuts.
Buuxi raashinka taangiga isla markaana xir daboolka si adag.
Ma taqaanaa? Ducks waa kala duwanaansho aad u fiican: waxay dhacdaa in ay ku qasabaan inay qoto dheer ku hayaan 6 m gadaashiisa.
Dhismayaasha tufaaxa ayaa sidoo kale fudud in la soo saaro, waxaana loogu talagalay labadaba caloolxumo iyo qalalan. Sababtoo ah qaabkooda, way fududahay in la isticmaalo, nadiifiyo wasakhda iyo qashinka, iyo sidoo kale jeermis. Si loo abuuro naqshad tayo leh, marka hore waxaad ubaahan tahay inaad abuurto sheyga wax soo saarka mustaqbalka. Baadhitaanku waa inuu leeyahay dhinacyo badan: tani waa lagama maarmaan si aysan shimbiruhu u fuulin gudaha taangigana ha ku soconin cuntada.
Baro sifooyinka quudinta ducks ee guriga.
Waxaad u baahan doontaa qalabka iyo qalabka soo socda:
kuraasta alwaaxa ilaa 2 cm qaro weyn;
dheriga alwaax 1 m dheer;
muraayadaha ama nalka;
maro sife ah.
Kadibna waxaanu sameynaa quudin adag sida ayadoo la raacayo tilmaamaha soo socda, la socoshada xaddiga lagu tilmaamay sawirka:
Cabbir dhererka dhererka ee guddida iyo jarjarada dhinacyada.
Iska yaree dhinaca hoose ee feederiyaha.
Sawirrada geesaha 6-xagalka ah.
Si loo hirgeliyo dhammaan meelaha banaan oo leh waraaqo ciid.
Ku dhaji dusha daboolka hoose ee saxaarada iyada oo la isticmaalayo naas-nadiifinta.
Ku dheji labada dhinac ee saxaarada labada dhinacba ku dheji nalka iyo xarkaha hoose ee hoose iyo dhinacyada.
Ku rid tareenka qoryaha alwaaxda labada dhinacba. Waxaa lagama maarmaan u ah fududeynta gaadiidka saxda ah, iyo sidoo kale shimbiraha aan ku dhex gali gudaha.
Waa muhiim! Nolol dhaadheer, dhismayaasha alwaaxa waa in lagu daboolaa antiseptics ilaalinta. Waa wax aan la aqbali karin kiiskan si uu u isticmaalo caanaha ama rinjiga, maadaama ay qaybahooda waxyeeli karaan ay geli karaan quudinta.
Noocyada ku samaynta berkadaha iyaga oo gacmahooda iska leh: Talooyin ka yimid beeralayda
Marka la sameeyo wax soo saarka weelasha quudinta duurjoogta, talada beeralayda qibrada leh ee hore u haystay waayo aragnimadani ma faragelin doonto. Waa kuwan talooyin sahlan:
Yuri. Bilowgii hore ee beertayda, waxaan isticmaalaa weelal caag ah oo aan qaali ahayn oo loogu talagalay quudinta ducks. Laakiin waxaa loo soo jeestay in qalabkani uu yahay mid gaaban noloshooda sababtoo ah saameynta isbeddelka heerkulka. Sidaa darteed, waxaan kugula talin lahaa in aad isticmaasho badeecooyinka la rumaysan karo ama aad naftaada u dhigi kartid. Waxaa intaa dheer, ma aha wax aad u adag oo qiimo leh si aad ulahaaga u qabato gacmahaaga: tuubooyin tuubada bulaacada ah ayaa la qaadaa, dhowr meelood oo ballaadhan ayaa la gooyaa, muraayadaha waxaa lagu rakibay labada dhinac ee tuubada, iyo tuubooyinka feederuhu waxay ku xiran yihiin taageerooyinka.
Nikolai. Awoodda ay ku sameyn karaan in ay ku dhejiyaan gacmahooda ayaa si fiican ugu haboon guriga. Waxaan doorbidaa nuujiyeyaasha baabuurta battariga ah ee ka sameysan biraha leh naqshad sahlan: warqad bir ah oo la duubay qaabka markab laga sameeyey warqad. Waxa ugu muhiimsan waa in lagu xisaabiyo wax kasta oo sax ah, haddii kale xitaa xitaa khilaafaadka yar ee xisaabinta ayaa ka dhigi doonta alaab aan la taaban karin.
Anatoly. Waxaan u soo jeedinaa fiiro gaar ah oo ku saabsan soo saarka khamriga ama nuujiyaha - si aad u adkeyso dhismaha taageerada. Xaafaddayda, waxaa dhacay dhacdo: cabitaan weyn oo cabitaan ah oo qaab bangi ah ayaa liitay mid aan fiicnayn oo miisaankeedu uu biyuhu ku dhaceen shimbiraha, kaas oo lahaa in la gooyo isla markiiba dabadeed. Waxaa muhiim ah in la xusuusto in ducks ay yihiin shimbiro firfircoon, iyo marka ay jiraan qaar badan oo ka mid ah guriga, waxay si wadajir ah u soo rogi karaan weelasha. Sidaa darteed, waxaan kugula talinayaa inaad ku xirto naas-nuujiyaha iyo cabitaanada si aad u adag.
VIDEO: BADBAADINTA CUDURKA AH EE LAGU QAADO Gebogebo, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in samaynta naas-nuujinta gacmahaaga aysan aheyn hawl fudud, gaar ahaan maadaama aysan u baahnayn kharashyada waaweyn. Doorashadani waxay ku habboon tahay beeralayda digaaga iyo beeralayda beeraha yaryar, sababtoo ah alaabadaan waxaa loo qaadan karaa si gaar ah xaaladahooda iyo tirada digaaga.